Akụkọ - Uru elele nke akpaka na ịpịnye igwe
Igwe igbe igbe
HTH-100 Cartoning igwe
HTH-100 High Speed ​​Cartoning igwe
HTH-120 Cartoning igwe
HTH-120 High Speed ​​Cartoning igwe
Uru nke akpaka nkwakọ ngwaahịa na igwe na-etinye aka
1. Igwe akụrụngwa na katọn na-arụ ọrụ na-ebelata ụgwọ ọrụ ma na-ejigide ọsọ, nkenke na nkwụsi ike.
2. Meziwanye ọrụ ndị ọrụ. Ọsọ nke igwe na-ebu akpaka na-agba ọsọ karịa nke nchịkọta akwụkwọ ntuziaka.
3. Ọ bụrụ na nkwakọ ngwaahịa na-arụ ọrụ ruo ogologo oge, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-emehie ma mebie ọghọm na-enweghị isi, enwere ike izere nke ukwuu ma ọ bụrụ na ejiri igwe nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụ ezie na igwe nkwakọ ngwaahịa akpaka abụghị 100% enweghị njehie, ọnụọgụ nje dị oke ala.
4. The akpaka nkwakọ ngwaahịa na Cartoning igwe nwere ike ghọtara site n'aka ma ọ bụ ike iru. Dị ka nkwakọ ngwaahịa agụụ, nkwakọ ngwaahịa inflatable, ndochi isobaric, wdg.
5. Ọ nwere ike n'ụzọ dị irè na-ekwe nkwa na àgwà nke nkwakọ. Dịka ihe ndị a chọrọ si chọọ, enwere ike ịnwe ntọala dị iche iche iji hụ na agwa dị mma.
6. Ndụ ọrụ nke igwe nkwakọ ngwaahịa bụ ihe dịka 6-10 afọ tupu mgbe ahụ, na otu igwe nkwakọ ngwaahịa nwere ike dochie ndị ọrụ iri na abụọ ruo ogologo oge na ịrụ ọrụ dị ike, nke nwere ike ịchekwa ọtụtụ ụgwọ mmepụta maka ụlọ ọrụ ahụ.
7. Ọ na-echebe ahụ ndị ọrụ, dịka nsị, iwe, redioactive, na ngwaahịa na-emebi emebi. Ọ bụrụ na ejiri nkwakọ ngwaahịa aka, ọ ga-emerịrị emerụ ahụ ndị ọrụ ahụ karịa oge, yana igwe akụrụngwa akụrụngwa Enwere ike izere ya.
Igwe akụrụngwa akụrụngwa na igwe katọn na-aghọwanye ihe a na-ahụkarị na ndụ anyị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji igwe nkwakọ ngwaahịa akpaka na usoro mmepụta.
Post oge: Ọkt-21-2020
SNS siri ike.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na arụmọrụ nke ụgbọ ahụ ...
Ọdịnihu nke atụmanya nke intel ...
Uru nke akpaka nkwakọ ngwaahịa na ụgbọ ala ...
Kpọọ Anyị Ugbu a: 0086-13506565432